Fampirantiana : Aseho etsy amin’ny IKM Antsahavola ny momba an-dRanavalona III -
AccueilSongandinaFampirantiana : Aseho etsy amin’ny IKM Antsahavola ny momba an-dRanavalona III
Fampirantiana : Aseho etsy amin’ny IKM Antsahavola ny momba an-dRanavalona III
Mpanjaka farany teto Madagasikara. Ny tantara tsy fanadino ary haren-tsaina ho an’ny mponina ny fahalalàna ny tantaram-pirenena. Tafiditra amin’ny fiaraha-miasan’ny ivon-toeran’ny kolontsaina malagasy (IKM) sy ny fikambanana Mamohaela, tanterahina ny zoma 23 sy ny sabotsy 24 febroary izao, etsy amin’ny IKM Antsahavola ny hetsika fampirantiana sy fampahafantarana ny momba an-dRanavalona III. Hosantarina amin’ny fampirantiana an-tsary ny tantaram-piainan’ity Mpanjakavavy farany teto Madagasikara ity ny hetsika amin’ny andro voalohany. Haseho an-tsary araka izany ny lalana nodiaviny nanomboka tamin’ny nandimbiasany an-dRanavalona II, ka hatramin’ny nahafatesany sy ny nanaovana sesitany azy. Hita amin’izany ihany koa ireo daty samihafa nanamarika ny fiainany toa ny 22 novambra 1861, daty nahaterahany ka nitondrany ny anarana hoe Razafindrahety. Io daty nahaterahany io rahateo no nametrahana azy ho mpanjaka teo amin’ny faha-22 taona. Ny 23 mey 1917 izy no nalefa sesitany tany Alzeria rehefa nanjaka nanomboka ny 30 jolay 1883 ka hatramin’ny 28 febroary 1897.
Nanamarika ny tantarany, toa ireo mpanjakavavy roa teo alohany ihany koa ny fanambadiany ny Hova Rainilaiarivony izay sady praiminisitra. Fanambadiana namboarina noho ny lafin’ny politika.
Ny sabotsy 24 febroary kosa, manomboka amin’ny 10 ora maraina, dia hisy ny famelabelarana arahina adihevitra miainga amin’ny lohahevitra hoe « Ny tao amabadiky ny 28 febroary 1897, araka ny fitantaran’ireo vavolombelona sy ireo raki-tsoratra voatahiry ». Mialoha izany anefa, dia hisy ny famelabelarana momba an-dRanavalona III, ataon’i Bary Jean Andrianalizah.
Mbola betsaka ireo angom-baovao tsy mitovy mahakasika ity Mpankajavavy farany teto Imerina ity, ka sehatra iray ahafahana mandalina ny tantara ny hetsika toa izao. Tafiditra amin’ny fahatsiarovana ny faha-121 taona nandefasana azy sesitany ity hetsika ity.